Uganda: Qaxooti reer South Sudan ah oo kubad la daawanayey qudha iskaga jaray - BBC News Somali
Dilkaasi ayaa ka dhacay gudaha xerada qaxootiga Rhino ee ku taalla woqooyi galbeed dalkaasi Uganda, halkaasi oo ay ku nool yihiin qiyaastii afar milyan oo qof oo ah qaxootiga ka soo qaxay colaadda South Sudan.
17-kani nin ayaa xabsiga loo taxaabay kaddib markii lagu tuhmay in ay ku lug lahaayeen rabshado ku billowday muran ka dhashay kursi yaalay gudaha meel lagu daawanayay ciyaar ka mid ah kuwa koobka adduunka, murankaa oo markii dambe sababay in afar nin oo u dhashay South Sudan ay bud iyo faas isla dhacaan oo ay halkaasi ku dhintaan.
Afhayeen u hadlay booliska Uganda ayaa sheegaya in tan iyo maalintii Axadda ahayd ee la soo dhaafay gudaha xeradaasi qaxootiga la kala saaray dadka ka soo kala jeeda qabaa'ilada Dinka iyo Nuer cabsi laga qabo in rabshado aargoosi ah ay halkaasi ka dhacaan. Dhimashada ayaa dhacday xilli dadku ay shaashad ka daawanayeen ciyaar u dhaxeysay waddamada Brazil iyo Switzerland.
Colaadda u dhaxeysa qabaa'ilada Dinka iyo Nuer ayaa ah mid soo jiitameysay muddo aad u dheer balse is-maan dhaaf sanadkii 2013 ka dhex dhacay siyaasiinta South Sudan ayaa sababay rabshado baaxad leh, waxaana dhanka dalka deriska ah ee Uganda u qaxay in kabadan hal milyan oo qof.